Degso Truck Simulator 2018: Europe APK loogu talagalay Android
Degso Truck Simulator 2018: Europe
Bilaash Degso loogu talagalay Android (544.70 MB)
Degso Truck Simulator 2018: Europe,
Truck Simulator 2018: Yurub, waxsoosaarka gudaha, gabi ahaanba af Turki, kaliya maahan Android; Ciyaarta jilitaanka ugu fiican ee madal mobilada. Baabuurta korontada ee jiilka cusub ayaa ugu fiican ciyaaraha xamuulka ee guur guura oo leh taraafikada dhabta ah, cimilada dhabta ah, waddooyin kala duwan, khariidado faahfaahsan iyo astaamo badan oo aan tiro lahayn. Waa bilaash inaad soo dejiso oo aad ciyaarto, sidoo kale!
Waxaan ku safreynaa magaalooyinka Yurub baabuurta xamuulka ah ee aan ugu jecel nahay Truck Simulator 2018, ciyaarta xamuulka cusub ee Ciyaaraha Zuuks, oo ah soosaaraha cayaaraha jilitaanka ee gaadhay malaayiin wax laga soo degsado moobiilka. Soosaarka, oo isku daraya garaafyada tayada konsole iyo waayo -aragnimada wadista baabuurta xamuulka ah, waxaan ka qaadannaa midka aan ugu jecel nahay 9 baabuur, oo ay ku jiraan baabuur koronto oo cusub, oo aan ku soconno waddooyin dhaadheer. Ma ku wareegayso waddooyinka tuulooyinka, magaalooyinka, jidadka waaweyn; Waxaan fulinaa hawlaha iyo waajibaadka naloo xilsaaray. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u dhammaystirno hawlaha, ayay u badan tahay in aan kasbanno, laakiin haddii aan jebino xeerarka taraafikada, dhibcahayagii ayaa yaraaday. By habka, wax walba waa macquul. Waxaan ku bilaabeynaa baabuurkeena anagoo riixeyna badhanka bilowga / joogsiga, waxaan xirnaa suumanka kursiga oo si nabad ah ayaan ku baxnaa. Cimiladu si joogto ah ayay isu beddeshaa markaad baabuurka waddo.
Baabuurka Baabuurka 2018: Tilmaamaha Yurub:
9 baabuur oo la dooran karo (oo ay ku jiraan baabuur koronto oo cusub)
Faahfaahin gudaha ah (qol)
Waayo -aragnimada wadista baabuurka xamuulka ah
Isbedelka cimilada (roob, baraf, ceeryaamo)
Gaadiidka dhabta ah
Tuulada, magaalada iyo jidadka waaweyn
In ka badan 60 shaqo iyo hawlo
Meelo indho qabad leh
Xiriir buuxa oo Turki ah
Barnaamijyada La Xiriira: Degso Europe Truck Simulator
Truck Simulator 2018: Europe Noocyada
Cabirka Faylka: 544.70 MB